January 31, 2021 - Hargeele - Wararka Somali State
Fugitive ex-leader of Ethiopia’s Tigray region vows ‘extended resistance’ – Reuters
Ethiopia News January 31, 2021
Fugitive ex-leader of Ethiopia’s Tigray region vows ‘extended resistance’ Reuters Ethiopia accused of using ethnic profiling to target Tigrayans Financial Times Removed leader of Ethiopia’s Tigray promises ‘resistance’: Audio Al Jazeera English Ethiopian Dissident Vows to Continue Fighting Federal Sii akhriso
Cayaaraha January 31, 2021
(Barelona) 01 Feb 2021. Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Athletic Bilbao, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-1, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka La Liga dalka Spain. Qeybyta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysa kooxda Barcelona. Daqiiqadii 20-aad kooxda Barcelona ayaa hoggaanka u […]Sii akhriso
Militants Storm Hotel in Somali Capital and Blasts Rock Area – The New York Times
Somali News January 31, 2021
Militants Storm Hotel in Somali Capital and Blasts Rock Area The New York TimesView Full Coverage on Google NewsSii akhriso
(Barelona) 31 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Barcelona iyo Athletic Bilbao ee horyaalka La Liga ayaa la shaaciyey Kooxda Barcelona ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Athletic Bilbao si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka La Liga ee dalka Spain. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan […]Sii akhriso
Liverpool oo saddexda dhibcood kaga soo qaadatay West Ham United garoonkeeda London Stadium… +SAWIRRO
(London) 31 Jan 2021. Liverpool ayaa saddexda dhibcood kaga soo qaadatay West Ham United garoonka London Stadium, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-3, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbardhac 0-0 ah. Qeybta labaad ee dheesha marka dib leysugu soo laabtay labada dhinac ayaa waxay soo […]Sii akhriso
Muxuu Thomas Tuchel ka yiri kaddib guushii ay Chelsea ka gaartay kooxda Burnley??
(London) 31 Jan 2021. Tababaraha reer Germany iyo kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel, ayaa ka hadlay guushii ay ka gaareen naadiga Burnley. Chelsea oo garoonkeeda Stamford Bridge guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Burnley, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee ee horyaalka Premier League. Thomas Tuchel ayaa dhaleeceeyay […]Sii akhriso
Shirka isku duwidda caafimaadka guud ee dalka oo muqdisho ka furmay “SAWIRRO”
Soomaaliya January 31, 2021
MUQDISHO-(SONNA)-Wasiirka wasaaradda Caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya dr Fowsiyo Abiikar Nuur ayaa maanta furtay shirka isku duwidda caafimaadka guud ee dalka kaas oo socon doona muddo labo maalin ah. Maalinta 1-aad ee shirka waxaa diiradda lagu saari doonaa diyaarinta habraacyada guddiyo farasamo oo la socon doona dhammaan hawlaha Sii akhriso
(London) 31 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha West Ham United iyo Liverpool Premier League ayaa la shaaciyey. Kooxda West Ham United ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Liverpool si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka England. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan […]Sii akhriso
Shaqaalaha Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo ka qeyb qaatay Barnaamijka Isxilqaan “SAWIRRO”
MUQDISHO-(SONNA)-Shaqaalaha Rayidka ee Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Xukuumadda Soomaaliya ayaa ka qeyb qaatay wareegga sideed iyo tobanaad ee barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo xarumaha danta guud, kaasi oo qeyb ka ah dadaallada dib loogu dhisayo xarumihii loogu adeegi jiray bulshada. Qaar ka mid ah shaqaalaha Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo ka hadlay Sii akhriso
(Yurub) 31 Jan 2021. Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa sii wadaya inuu ka fikiro halka uu ku wajahan yahay xilli ciyaareedka soo socda, isagoo rajeynaya inuu ka tago garoonka Santiago Bernabéu. Qandaraaska Sergio Ramos ee Real Madrid ayaa dhacaya xagaaga soo aadan, waxaana gabi ahaanba burburay wada hadaladii u dhexeeyay isaga iyo maamulka […]Sii akhriso